health Archives - NepalDut NepalDut
दसैं, तिहार नेपालीका महान चाड हुन् । यो बेला घरमै खसी काट्ने, धेरै मात्रामा मासु खाने गरिन्छ । पछिल्ला दशकमा हाम्रो खानपानमा धेरै परिवर्तन आएको छ । हाम्रो खानामा मासुको मात्रा बढेको छ । जनावरबाट पाइने बोसो अलि बढी खाइन्छ । दसैंमा त घरैमा ल्याएर खसी काट्ने गरिन्छ । घरमै सेल पकाउने गरिन्छ । बिहान बेलुकै मासु खाइन्छ । मासुकै खाजा, मासुकै तरकारी, मासुकै अचार खाइन्छ । एकैचोटि यसरी धेरै… पुरा पढौ
कोरोना भाइरस : सरेपछि के हुन्छ ? जोगिने उपाय के हुन् ?
कोरोना भाइरस संक्रमण एक प्रकारको रुघा हो । कोरोना संक्रमण र रुघाखोकीका लक्षण उस्तै हुन्छन् । सर्ने माध्यम पनि रुघा सरेजस्तै हो । खोक्दा, छिउं गर्दा, सास फेर्दा, बिरामीका सामान प्रयोग गर्दा, बिरामीले छोएको ठाउँमा छुँदा, मासु राम्रोसंग नपकाएर खाँदा आदि माध्यमबाट यो सर्छ । यो रोगको सजिलै पत्ता लाग्ने अवस्था छैन । यसका लागि ल्याब टेस्ट गर्न ठूलो प्रयोगशालामा श्वासप्रश्वास नलीको स्वाब पठाउनुपर्छ । यसको कुनै उपचार छैन ।… पुरा पढौ
गण्डकीमा अल्जाइमर दिवस मनाइने
अल्जाइमर रोगबाट विश्वमा ४८ मिलियनभन्दा बढी मानिस पीडित छन् । यसबारे जनचेतना जगाउन हरेक वर्ष २१ सेप्टेम्बरमा विश्व अल्जाइमर दिवस मनाइन्छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालमा पनि यो दिवस मनाउन थालिएको छ । यस रोगबारे सचेतना जगाउन र अल्जाइमरका रोगीहरुलाई उपचारको पहुँचमा पु¥याउन गण्डकी प्रदेशमा पनि यो दिवस मनाइने भएको छ । अल्जाइमर एक प्रकारको बिर्सने रोग हो । यसले स्मरण शक्ति, सोच्ने क्षमता लगायतमा असर पार्छ । यो रोग… पुरा पढौ
युआरएलको प्राविधिक सहयोगमा पुतलीबजारमा शिविर
नवरत्न बचत तथा ऋण सहकारीले स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका १ प्रगति नगरमा निशुल्क शिविर आयोजना गरेको छ । युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी प्रालि(युआरएल)को प्राविधिक सहयोगमा शनिबार हुने शिविरमा मधुमेह तथा रगतमा हुने खराब बोसो –टिजी) सित्तैमा जाँच हुनेछ । स्वस्थ जीवनका लागि आवश्यक जीवनशैली, रोग लागिसकेपछिको उपचार र खानपानबारे कार्यक्रममा सहभागीलाई सचेतनासमेत दिइनेछ । गण्डकी प्रदेशकै पहिलो रेफरेन्स ल्याब युआरएलले शिविरमा अन्य सबै प्रकारका जाँचमा पनि ५० प्रतिशत छुट दिनेछ । प्रदेशकै… पुरा पढौ
केसी र विजयको अनसन र उपचार एकै अस्पतालमा
१६ औं अनसनको १० औं दिन एकाएक स्वास्थ्यमा बढी समस्या देखिएपछि बिहीबार राति नै अनसनस्थल इलामबाट ल्याइएको डा. गोविन्द केसीको अहिले राजधानीको त्रिवि शिक्षक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । यस्तै डा. केसीको मागविरुद्ध अनसन बसिरहेका विजय थापाको पनि डा. केसी रहेकै अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । आठ दिनदेखि डा. केसीविरुद्ध इलामको लाकुरी चौतारामा अनसन बसिरहेका थापाको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि सेनाको हेलिकोप्टरबाट आज (शुक्रबार) थापालाई काठमाडौं ल्याइएको हो । डा. केसीलाई… पुरा पढौ
सरकारी डाक्टर आन्दोलित, सेवै छाड्ने चेतावनी
समायोजनका लागि कर्मचारीहरुले धमाधम अनलाइन फारम भरिरहेको सरकारले दावी गरिरहेका बेला आइतबार सरकारी डाक्टरहरुले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय घेराउ गरेका छन् । निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन र सरकारबीच ९ बुंदे सहमति भएपछि कर्मचारी समायोजनको किचलो सकिएको अनुमान चलिरहेका बेला आज सरकारी डाक्टरहरुले कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रालय घेराउ गरेका हुन् । सरकारी डाक्टरहरुले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश र संघीयता अनुसारका नयाँ संगठन संरचनाको विरोधमा जनसंख्या मन्त्रालयमा घेराउ गरेका हुन् ।… पुरा पढौ
अटिजम केयर नेपाल सोसाइटी काठमाडांै र कास्कीले संयुक्त रुपमा अटिजमसँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण निकायसँग छलफल गरेका छन् । अटिजम बच्चाले जन्मजात लिएर आउने एक विशेष प्रकारको अपांगता हो । जसलाई मस्तिष्क विकासको विकार पनि भनिन्छ । यसले मस्तिष्कको सामान्य कार्यहरुलाई प्रभावित पार्दछ । अटिजम प्राय जसो जन्मेको ३ वर्ष भित्र प्रष्ट रुपमा देखिन्छ र यो जीवनभर रहिरहन्छ । अटिजमका लक्षण फरक फरक हुन्छन् । तर मुल समस्याको रुपमा सञ्चारलाई बुझ्न… पुरा पढौ
वडा नं १६ सेनेटरी प्याड युक्त विद्यालय घाेषणा
पाेखरा महानगरपालिका वडा नं १६ का विद्यालय सेनेटरी प्याड युक्त घाेषणा भएका छन् । वडा कार्यलय १६ ले विद्यालयलाइ सेनेटरी प्याड,हातधुने सावुन सहित ट्वाइलेट पेपर दिएर अवदेखी ट्वाइलेटमा निशुल्क सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन गर्न अनुराेध गर्दै घाेषणा गरेकाे हाे । कार्यक्रममा सहभागीलाइ महिनावारी तथा प्याडकाे प्रयाेगका सम्वन्धमा सचेतना सहित विद्यार्थीलाइ पुन: प्रयाेग गर्न मिल्ने कपडाकाे सेनेटरी प्याड समेत वितरण गरिएकाे थियाे । कार्यक्रमकाे उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि प्रदेश सांसद प्रभा काेइरालाले… पुरा पढौ
अबको संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव
उपप्रधानमन्त्री एव्म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले अबको संसद् बैठकबाट संविधान संशोधनको प्रस्ताब अघि बढाइने बताएका छन् । उनले अहिले आफूहरू तत्काल सरकारबाट बाहिरिने नभई अबको बैठकमा संशोधन प्रस्ताब लैजाने उल्लेख गरे। पार्टी सरकारमा भएका कारण संविधान संशोधनको मुद्दा ओझेलमा नपरेको उनको जिकिर छ । अहिले संविधान संशोधन प्रक्रियामा रहेको उनले उल्लेख गरे । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि काम भइरहेको उनले बताए । सरकारी अस्पतालमा उपचारको गुणस्तर सुधार गर्ने… पुरा पढौ
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति मातहतको उपसमितिले आगामी प्रतिनिधिसभाको बैठकका लागि पहिलो व्यावसायिक कार्यसूचीको रूपमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । उपसमितिको आइतबारको बैठकले उक्त कार्यसूचीको रूपमा समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी उपसमितिले कार्यसम्पादन गर्ने र सोहीअनुरुप समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरेको समितिका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए । उपसमितिले त्यसका लागि समितिका सदस्य भैरवबहादुर सिंहलाई सर्वसम्मतिले संयोजक चयन गरेको छ । बैठकले विधेयकमा संशोधनकर्ता… पुरा पढौ